Wasiirka Deegaanka Somaliland oo ku faraxsan in ay leedahay Baarlamaan la xisaabtama – Kalfadhi
February 10, 2019 Kalfadhi
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Wakiillada Somaliland ayaa arrin la xiriirta xaaladda deegaanka kala hadlay Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Reer Miyiga, Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil (Baandare). Kulan ay ku yeesheen Magaalada Hargeysa ayuu Xildhibaan Saciid Carte, oo ka tirsan Guddiga Googtada ah ee Baarlamaanka Somaliland, ugu warramay wariyayaasha in ay Wasiiraddu si faahfaahsan ugu sheegtay jawaabaha su’aalihii ay ka qabeen deegaanka.
“Maanta halkan waxaan ugu yeeranay Wasiirka Deegaanka, anagoo ah Guddiga Joogtada” ayuu Xildhibaan Carte ku yiri suxufiyiinta. “Waxaanu ka wada hadalnay dee hawlaha qaranka ay u hayaan, warbixin fiican oo waafiyana wey naga siisay hawlaha deegaanka” ayuu hadalkiisa raaciyey. Waxa uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay Wasiiraddu aqbashay in ay u timaado, oo ay su’aalo ka weydiiyaan shaqada ay Somaliland u hayso.
Wasiir Shukri ayaa dhankeeda sheegtay in ay ku faraxsan tahay inuu Baarlamaanku ilaalo ku hayo, taas oo ay sheegtay in ay ka heleyso dhiiragelin ah in ay ku xisaabtameyso in shaqada ay hayso lagu xisaabinayo, sida ay hadalka u dhigtay. “Runtii dareen aad u wanaagsan ayaanu ka qaadanay sidey su’aalaha noo weydiinayeen, sidey noo dhageysteen iyo sida aanu warbixin waafiya isu siinay” ayey tiri Shukri. “Markaas oo kale waxaad dareemeysaa in lagula socdo, oo uu baarlamaanku kula socdo, dowladdu kula socoto, oo lagu barbar taagan yahay” ayey hadalkeeda raacisay.
Waxay sheegtay in xaaladda deegaanka, oo ay badi guddiga kala hadleysay, ay aad u adag tahay, dadkuna ay u baahan yihiin iney helaan wacyi ah iney dhirta iyagu u baahan yihiin ee aysan dhirtu u baahneen dadka. Waxay aad uga digtay xaalufinta, waxa ayna soojeedisay in ay Reer Somaliland, haddii aysan dhir jarista dhaafeen, ay isticmaalaan midda aan munaaficaadka u lahayn deegaanka.